म्याद थप गरेर प्रहरी कार्यालय लैजाँदै गर्दा फरार भएका थुनुवा पक्राउ
बुधबार, जेठ २१, २०७७Wed, Jun 03, 2020
निको भएका २७२१०८८
अपडेटः मंगलबार, जेठ २०, २०७७ । २१:५० बजे । स्रोत : coronavirus.jhu.edu/map.html र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
नेपाल लाइभ सोमबार, असोज २७, २०७६, १०:४६
काठमाडौं- सार्वजनिक नैतिकता विरुद्धको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङबाट म्याद थप गरेर इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर लैजाँदै गर्दा बाटोबाटै फरार भएका थुनुवा पक्राउ परेका छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-५ का २१ वर्षीय फरार थुनुवा विष्णु बुढाथोकीलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको हो। उनी गत शनिबार राप्ती अञ्चल अस्पताल घोराही अघिबाट प्रहरीलाई झुक्याएर फरार भएका थिए। आइतबार बुढाथोकीलाई प्रहरीले तुलसीपुर बसपार्कबाट पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ परेका थुनुवा बुढाथोकीको साथबाट १ ग्राम ३ सय ४० मिलिग्राम लागुऔषध ब्राउनसुगर बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यसैगरी, दाङ प्रहरीले खुकुरी प्रहार गर्ने अर्का एक जनालाई पनि पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका-६ का २२ वर्षीय निमबहादुर वली छन्। उनलाई आइतबार राति खुकुरीसहित पक्राउ गरिएको दाङ प्रहरीले जनाएको छ।
वलीले सामान्य विवादका क्रममा सोही ठाउँका ३० वर्षीय प्रकाश थापालाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए।
घाइते थापाको मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ। उनको टाउको र बाँया कानमा गहिरो चोट गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
गन्तव्य मुलुकका लागि काउन्सेलर र श्रम सहचारी छनौट, कुन देशका लागि को छानिए?
सरकारले गर्‍यो कतारबाट नेपाल फर्कनेको वर्गीकरण
रुकुम घटना : ६ जनाकै शव भेटियो भेरी नगरपालिका ११ बस्ने १८ वर्षीय गोविन्द शाहीको शव २० गते भेटिएको हो। साँझ करिब ६ बजे भेरी नगरपालिका-१३ स्थित भेरी नदीमा स्थानीय बा... मंगलबार, जेठ २०, २०७७
मालपोत अधिकृतले कमाए साढे १० करोड अकुत सम्पत्ति, लुकाउन सालीदेखि जेठानसम्मको प्रयोग उनले गैरकानूनी आर्जनबाट उक्त सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मंगलबार मुद्दा दायर गरेको छ।२०५४... मंगलबार, जेठ २०, २०७७
बाटो ढुकेर साथीको हत्या, पक्राउ परे तीन युवक जेठ १८ गते राती करिब सवा ९ बजेको समयमा छिमेकी खिले भनिने अमित घिमिरेको घरमा प्रज्वल राई र रादन राईबीच सामन्य वादविवाद भएको थियो। विव... मंगलबार, जेठ २०, २०७७
गन्तव्य मुलुकका लागि काउन्सेलर र श्रम सहचारी छनौट, कुन देशका लागि को छानिए? मंगलबार, जेठ २०, २०७७
सरकारले गर्‍यो कतारबाट नेपाल फर्कनेको वर्गीकरण मंगलबार, जेठ २०, २०७७
नेपाल लाइभ समाचार [भिडियो] मंगलबार, जेठ २०, २०७७
मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेभन्दा फरक बजेट आयो : कृषि सचिव भारी मंगलबार, जेठ २०, २०७७
'हजारौं युवा स्वदेश फर्कंदै, प्रदेशमा छैन व्यवस्थित क्वारेन्टाइन' मंगलबार, जेठ २०, २०७७
काठमाडौंमा ४ सहित थप २८८ जनामा कोरोना संक्रमण, २०९९ पुगे संक्रमित : स्वास्थ्य प्रवक्ता मंगलबार, जेठ २०, २०७७
हायातको १५० रोपनी जग्गा फिर्ता गराउन तारागाउँको पत्र पर्यटन मन्त्रालयमा मंगलबार, जेठ २०, २०७७